Xog: Nabadsugidda Somalia oo laga mamnuucay isticmaalka Hubka iyo Gaadiidka Dagaalka. – Hornafrik Media Network
Xog: Nabadsugidda Somalia oo laga mamnuucay isticmaalka Hubka iyo Gaadiidka Dagaalka.
Wasiirka Amniga ee Xukuumadda Soomaaliya Maxamed Abuukar Islow ayaa sheegay in mustaqbalka dhow Ciidamada NISA loo celinayo sidii ay ahaan jireen oo ahaa Dharcad, iyadoo haatan ay ka mid yihiin ciidamada hubeysan ee magaalada lagu arko.
Wasiir Islow oo Wariyeyaasha kula hadlayay magaalada Muqdisho ayaa sheegay inay sameyn doonaan ciidamo gaar ah oo ilaaliya amniga Mas’uuliyiinta iyo goobaha kale, halka Ciidamada NISA ka dhigi doonaan kuwo dharcad ah. Wuxuuna Wasiirku hoosta ka xariiqay inaan la arki doonin Gaadiid ay ku buufsan tahay Calaamadda NISA, iyo Askari Nabadsugid ah oo wata Tuute u gaar ah.
Ciidamadii Nabadsugida ee dowladdii hore ayaa ahaa kuwo qarsoon oo dharcad ahaa, halka ciidamada xilligan howl gala ay yihiin kuwo aan qarsooneyn, calaamadahooda iyo astaamahooda lagu dhex arko magaalada iyo goobaha kale.
Qubaro dhinaca ammaanka ayaa horay u sheegay in meelaha dowladdu ay aadka ugu liidato ay tahay dhanka sirdoonka, maadaama ciidamo loogu tala galay howlaha Sirdoonka iyo xog raadinta ay ka mid yihiin ciidamada hubeysan ee gaadiidka dagaalka saaran ee magaalada lagu arko.
Dowladda Soomaaliya ayaa muddooyinkii u dambeysay dadaal ugu jirtay sugida amniga Caasimadda, iyadoo sameysay ciidamo isku dhaf ah, kuwaas oo markii dambe iskood u kala tagay.
Lama oga sida tallaabadan ku hirgeli doonto, maadaama Ciidamada ay leedahay Hey’adda NISA oo dhowr qeybood ka kooban ay yihiin kuwo ay Maamulaan Sirdoono Shisheeye oo aan toos uga amar qaadan Dawladda Somalia.
Dawladda Somalia ayaa hadda ciidanka kaliya ee ay ku tashado waxay yihiin Ciidamadda NISA, iyadoo aysan muuuqan Kaalinta Booliska oo aan haysan Qalab ku filan. Waxayna tallaabadan lagu kala dirayo Ciidanka NISA haddii ay hirgasho ay qatar ku noqon kartaa Ammaanka Caasimadda, iyadoona marka ay Qaraxyadda iyo Weeraradda sameeyaan Alshabaab ay markiiba soo afjaraan Ciidanka NISA oo ah kuwo u tababaran.
Ma jiro Ciidan loo tababaray Hawlaha ay NISA qabato oo buuxinayo Kaalintooda, ka hor inta aan iyaga loo badalin Dhar Cad.